NATO က ဥရောပလုံခြုံရေးလျော့နည်းကျဆင်းအောင် လုပ်ဆောင်နေဟု ရုရှားသမ္မတပူတင်ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက လမျက်နှာပြင်မှ နမူနာပစ္စည်း အချက်အလက် ဒုတိယအသုတ်အား အွန်လိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မြို့တော် တောင်ပိုင်းတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား ၊ အနည်းဆုံး လူ ၅ ဦး သေဆုံး
လာမည့် ရက်သတ္တပတ် (၂)ပတ်ကြာကာလတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ စုစုပေါင်း သန်း ၂၀၀ ကျော် ရှိလာနိုင်ဟု WHO ခန့်မှန်း
အီရတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား၊ လူ ၁၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၄၅ ဦး ဒဏ်ရာရ
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် မြေဧက ၂၄၄,၀၀၀ ကျော် တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွား
အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၌ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျမှုအတွင်း လူလေးဦးသေဆုံး
အမေရိကန်နှင့် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အပေါ် တောင်ကိုရီးယား မဆုံးဖြတ်ရသေး
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinovac ကာကွယ်ဆေးဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံခြင်း စတင်
တူရကီနိုင်ငံ အန်တယ်လ်ရာအပန်းဖြေမြို့အနီး တောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် အနည်းဆုံး လူ ၇ ဦးသေဆုံး
UNESCO ၏ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ နိုက်မြို့ကို ထည့်သွင်း
ဆီတင်သင်္ဘောတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက် အမေရိကန်က အီရန်အားပြစ်တင် ၊ လက်တုံ့ပြန်ရန် ပြင်ဆင်နေဟု ဆို
လက်ဘနွန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒုတိယရက်မြောက် တောမီး ဆက်လက်လောင်ကျွမ်း
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ရှိ အညတရစစ်သည်တော်များဂူဗိမ္ဗာန်၌ ပြုလုပ်သည့် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မော်စကို ၊ ဇွန် ၂၃ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင်က တင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေခြင်းနှင့် လက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင်မှုအသစ်တစ်ခု အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ဥရောပလုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုလုံးသည် လွန်စွာလျော့နည်းကျဆင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါနေ့က ပြောကြားလိုက်သည်။နာဇီဂျာမနီများအပေါ် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏ မဟာမျိုးချစ်စစ်ပွဲစတင်ခြင်း နှစ် ၈၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ပူတင်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဂျာမနီအပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်သော Die Zeit ၏ သတင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ဥရောပတိုက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၊ သို့သော် မြောက်အတ္တလန္တိတ်စစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့(NATO) ၏ အရှေ့ဘက်သို့ ဦးတည်၍ အင်အားတိုးချဲ့လာနေခြင်းက ဥရောပတိုက်တွင် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန် မယုံကြည်မှုကို လျင်မြန်စွာတိုးပွားစေခဲ့ကြောင်း ပူတင်က ဆိုသည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှ ခွာထွက်သွားသော နိုင်ငံများ အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၄ နိုင်ငံသည် စည်းမျဉ်းပိုင်းခြားမှုမထားဘဲ ဥရောပတိုက်အတွက် ထိရောက်စွာ တစ်စုံတစ်ယောက်အား ဦးတည်၍ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုရန် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် နေတိုး(NATO) အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းနိုင်ငံများစွာသည် ရုရှား သို့မဟုတ် အနောက်ဖက်နှင့်အတူ စုစည်း၍ တစ်ဖက်ဖက်ကိုရွေးချယ်ကာ လုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာ “ အလုံစုံပျက်စီးရေးတစ်ခု” ဟူ၍ ပူတင်က ဆိုသည်။
“ ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ဥရောပတိုက်ရဲ့ စစ်ပွဲအလွန်သမိုင်းတစ်ခုလုံးကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရုရှားအပါအဝင် နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းအားထုတ်မှုကသာ တစ်ခုတည်းသော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘုံတိုက်ကြီးအတွက် အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှု နဲ့ လုံခြုံမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ခိုင်မာသေချာပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။(Xinhua)
MOSCOW, June 22 (Xinhua) — The entire system of European security has been significantly degraded, while tensions are rising and the risks ofanew arms race are becoming real, Russian President Vladimir Putin said Tuesday.
He made the remarks in an article published in the German weekly newspaper Die Zeit to mark the 80th anniversary of the beginning of the Soviet Union’s Great Patriotic War against Nazi Germany.
Russia has sought to develop its relations with the Europeans, but the North Atlantic Treaty Organization’s expansion eastwards has led toarapid increase in mutual mistrust in Europe, Putin said.
Since 1999, 14 more countries, including former Soviet Union republics, have joined NATO, effectively dashing hopes foracontinent without dividing lines, he noted.
Putin called it “an ultimatum” that many countries are left withachoice of being either with the collective West or with Russia.
“The entire post-war history of Greater Europe confirms that prosperity and security of our common continent is only possible through the joint efforts of all countries, including Russia,” he wrote.
ပူတင်နှင့်ဘိုင်ဒန် ယခုအကြိမ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက ရုရှား-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး ပြောင်းလဲလာနိုင်မလား